Dhago la'aan, nimcooyin fadeexad leh, Kaniisadda God Switzerland Adduunyo (WKG)
Markaan dib ugu noqonno Axdigii Hore, oo u ahaa buugga 1aad ee Samuu'eel, waxaad ogaan doontaa, dhamaadka buugga, in reer binu Israa'iil (reer binu Israa'iil) mar labaad dagaal ay kula jiraan cadowgooda, reer Falastiin.
Xaaladdaas gaarka ah, waa la garaacay. Xaqiiqdii, waxay si adag u garaaceen garoon kubadeed Oklahoma, Orange Bowl. Waa wax xun; maxaa yeelay, maanta gaarka ah, ee dagaalkan gaarka ah, boqorkooda Saa'uul waa inuu dhintaa. Isaga, wiilkiisii, Jonathan, ayaa ku dhinta dagaalkaan. Taariikhdeenna waxay bilaabmaysaa dhowr cutub ka dib, 2 Samuu'eel 4,4 (GN-2000):
Intii jidka lagu jiray waxaa jiray wiil wiilkiisii ​​Saa'uul ahaa ina Yoonaataan, oo magiciisu ahaa Meerab-baal, oo isna labada cagoodna curyaan buu ahaa. Isagu wuxuu jiray shan sano markii aabihiis iyo awowgiisu dhinteen. Oo markuu warkii Yesreceel yimid ayaa kalkaaliyeyaashiisii ​​u kexeeyey si uu isaga ula baxsado. Laakiin degdeg bay u tuurtay. Isaga waa curyaan yahay weligiis. Tani waa riwaayaddii Mefiboshet. Sababtoo ah magacan way adagtahay in loogu dhawaaqo, waxaan u siinay naanays saaka, waxaan ugu yeernaa "Schet" muddo gaaban. Laakiin sheekadan, qoyskii ugu horreeyay wuxuu umuuqdaa mid si buuxda loo dilay. Markii warku gaaro caasimada oo uu yimaado qasriga, argagax iyo jahwareer ayaa qarxay - maxaa yeelay waad ogtahay in had iyo jeer marka boqorka la dilo, xubnaha qoyska sidoo kale la dilo si loo hubiyo inaysan jirin kacdoon mustaqbal. Sidaas ayey noqotay in daqiiqaddii fowdo guud ay walaasheed canug qaadatay Shet oo ay ka baxsatay gurigii. Laakiin socodkii iyo habsami u socodka goobta ka dhacay, ayay ku daadisay. Sida Kitaabka Quduuska ahi inoo sheegay, ayuu curyaamiyey inta ka hartay noloshiisa. Kaliya u maleynaya inuu ahaa jinsi boqornimada, maalinti ka horna, sida wiil kasta oo shan jir ah, wuxuu ku dhaqaaqayay walwal la'aan. Wuxuu ku socday agagaarka qasriga isagoo aan walwal qabin. Laakiin maalintaas mustaqbalkiisii ​​oo dhan wuu is beddelay. Aabihiis waa la dilay. Awoowgiis ayaa la dilay. Wuu tuuray oo curyaamiyey inta ka hartay cimrigiisa. Haddii aad sii waddo akhrinta Kitaabka Quduuska ah, waxbadan kama heli doontid kaas oo laga soo sheegi doono Qorshaha 20-ka sano ee soo socda. Waxa kaliya ee aan ka ognahay isaga ayaa ah inuu ku nool yahay riyo, meel cidlo ah oo xanuunkiisa haysa.
Ich kann mir vorstellen, dass manche von Ihnen schon beginnen, sich eine Frage zu stellen, die ich mir auch oft stelle, wenn ich Nachrichten höre: "Na gut, na und?» Na, und? Was hat das mit mir zu tun? Auf viererlei Weise möchte ich heute die Antwort zu dem «Na und?» geben. Hier ist die erste Antwort.
Waxaan u kala jabnay sidii aan u maleyneynay
Lugahaagu ma curyaami karaan, laakiin maskaxdaadu waa laga yaabaa. Lugahaaga ma jajabin karaan, laakiin, sida Kitaabka Quduuska ahi leeyahay, naftaada. Taasina waa xaaladda qofkasta oo ku jira qolkan. Waa xaaladdeena guud. Markuu Bawlos ka hadlayo xaaladdeenna cidla ', wuxuu hal talaabo u sii qaadayaa.
Eeg Efesos 2,1:
“Adiguna noloshaada waad ka qayb qaadatay. Horey ayaad u dhimatay; maxaa yeelay, adigu waad caasiyowday oo waad dembaabtay. Waxa uu dhaafaayaa in la jabiyo oo uu curyaamo uun. Wuxuu leeyahay xaaladaada ka go'ida Masiixa waxaa lagu tilmaami karaa 'mid xagga ruuxa ah'.
Markaas ayuu ku yiri Rooma 5: 6:
»Jacaylkan waxaa lagu muujiyey xaqiiqada ah in Masiixu naftiisa inoo bixiyay. Wakhtigii ku habboonaa, markii aan weli ku jirnay awoodda dembiga, wuxuu u dhintay innaga cibaadola'aanta.
Ma fahamtay Annagu ma caawin karno iyo haddii aad jeceshahay ama aad jeceshahay, inaad xaqiijin karto ama aadan oggolaan, rumeeysan iyo in kale, Baybalku wuxuu odhanayaa xaaladdaada (haddii aadan xidhiidh la lahaan Masiixa) taasi waa mid xagga ruuxa ah. Hadana waa wararka intiisa kale ee xun: ma jiraan wax aad ka qaban karto dhibaatada. Kuma caawinayso in si adag loo shaqeeyo ama loo horumariyo. Waxaan u kala jabnay sidii aan u maleyneynay.
Falkan wuxuu ku bilaabmayaa boqor cusub oo carshiga Yeruusaalem yaal. Magiciisuna waa Daauud. Waxaad u badan tahay inaad isaga ka maqashay isaga. Wuxuu ahaa adhijir adhijir ilaalin jiray. Hadda waa boqorka dalka. Wuxuu ahaa saaxiibka ugu wanaagsan, saaxiibka wanaagsan ee Schet aabihiis. Schet aabihiis magaciisa wuxuu ahaa Jonatan. Laakiin Daa'uud oo keliya carshigiisii ​​buu qaatay oo boqor buu noqday, sidoo kale wuxuu ku guulaystay qalbiga dadka. Xaqiiqdii, wuxuu boqortooyadii ku ballaariyey 15.500 sq km ilaa 155.000 sq km. Waxaad ku nooshahay wakhtiyada nabadda. Dhaqaaluhu si wanaagsan ayuu u socdaa, dakhliga cashuurtu wuu sarreeyaa. Haddii ay ahaan lahayd dimoqraadiyad, way ku guuleysan lahayd xilli labaad. Noloshu sidii hore kama sii fiicnaan lahayd. Waxaan u malaynayaa in David uu soo kacay subaxnimadii hore marka loo eego qof kale oo guriga jooga. Isaga oo firaaqada ah ayuu u soo baxayaa barxadda, isagoo u oggolaanaya fikradihiisu inay ku dhex wareegaan hawada subaxdii qabow kahor intaan culeyska maalinta la qaadin maskaxdiisa. Fikradihiisu way soo noqdaan, wuxuu bilaabaa inuu dib u soo celiyo cajaladihii uu soo maray. Maalintaan, guutadu kuma joogsanayso dhacdo gaar ah, laakiin waxay ku joogsataa hal qof. Waa Jonathan Yoonis saaxiibkiisii ​​hore ee uusan arag muddo dheer; wuxuu ku dilay dagaalka. Daa’uud wuxuu xasuustaa isaga, saaxiibkiis aad isugu dhow. Waqtiyada wuu xasuustaa. Dabadeed Daa'uud wuxuu xasuustaa isaga oo lahadlayay cirka buluugga ah. Daqiiqadaas, Daa’uud waxaa ka buuxsamay wanaagga Ilaahay iyo nimcadiisa. Sababta oo ah Yoonatan la'aantiis midkoodna taasi suuragal ma ahayn. Daauud wuxuu ahaa wiil adhijir ah imikana isagu waa boqor wuxuuna ku nool yahay guri fikirradiisiina wuu ku sii jeedaa saaxiibkiisii ​​hore Jonatan. Wuxuu xasuustaa wada sheekeysi markii ay heshiis wada galeen. Gudaha, waxay ku ballanqaadeen midba midka kale in midkastoo ka mid ahi uu daryeelo qoyska kale, iyada oo aan loo eegin halka ay u horseedi doonto socdaalkooda nolosha ee sii dheer. Daqiiqadaas Daa'uud dib buu u noqday oo wuxuu ku noqday gurigiisii ​​wuxuuna yidhi (2. Samuel 9,1): «Ist eigentlich von Sauls Familie noch jemand am Leben? Ich möchte dem Betreffenden eine Gunst erweisen – meinem verstorbenen Freund Jonatan zuliebe?» Er findet einen Diener namens Ziba, und dieser antwortet ihm (V. 3b): «Es gibt noch einen Sohn Jonatans. Er ist an beiden Füssen gelähmt.» Was ich interessant finde, ist, dass David nicht fragt: "gibt es irgendjemanden, der würdig ist?" oder "gibt es einen politisch Versierten, der im Kabinett meiner Regierung dienen könnte?" oder "gibt es jemanden mit militärischer Erfahrung, der mir helfen könnte, eine Armee zu führen?" Er fragt schlicht: "Gibt es irgendjemanden?» Diese Frage ist Ausdruck von Güte. Und Ziba antwortet: "Es gibt jemanden, der gelähmt ist". Aus Zibas Antwort lässt sich fast heraus hören: "Wissen Sie, David, ich bin nicht sicher, dass Sie ihn wirklich in Ihrer Nähe haben möchten. Er ist wirklich nicht wie wir. Er passt nicht zu uns. Ich bin mir nicht sicher, dass er königliche Qualitäten besitzt.» Aber David lässt sich nicht abbringen und spricht: "Sage mir, wo er ist.» Dies ist das erste Mal, dass die Bibel von Schet ohne Erwähnung seiner Behinderung spricht.
Waxaan ka fikiray arinkaas, adiguna waad ogtahay, waxaan u maleynayaa in koox sidan oo kale ah inbadan oo naga mid ahi halkaan nooga hayaan dhaleeceyn. Waxa jira wax nolosheena hore ku dhegeystay sida anqawyada kubbadda. Oo waxaa jira dad si joogto ah noogu eedeeyaan; waligood u oggolaan maayaan inay dhintaan. Markaa waxaad maqlaysaa wada hadallo sida, "Miyaad wax ka maqashay mar kale Susan? Susan, waad ogtahay, taasi waa tii ninkeeda ka tagtay." Ama: "Waxaan la hadlay Jo maalinta kale. Waad ogtahay cidda aan ula jeedo, sifiican, khamriga." Dadka qaarkiina waxay isweydiiyaan: "Ma jiraa qof aniga ila arka oo gooni ka ah waxyaabihii aan soo maray iyo wixii ku dhacay guuldarradayda hore?»
Ziba wuxuu yiri: "Waan ogahay halka uu joogo. Wuxuu ku nool yahay Lo Debar." Sida ugu wanaagsan ee lagu sharaxi karo Lo Debar wuxuu noqon lahaa "Barstow" (meel aad ugu fog Koonfurta California) Falastiin hore. (Qosol]. Xaqiiqdii, magaca macno ahaan waxaa loola jeedaa "meel madhalays ah". Halkaasuu ku nool yahay. David wuxuu helay barnaamijka 'Schet'. Bal qiyaas: boqorka wuxuu eryanayaa curyaanka. Waa tan jawaabta labaad ee "ceelka, iyo?"
Waxaa lagula soconayaa si ka sii xoog badan sida aad u maleyneyso
Waa wax cajiib ah. Waxaan rabaa inaad xoogaa yar hakad gasho oo aad ka fikirto. Kaamil, Quduus, Xaq ah, Ilaaha Qaadirka ah, oo aan dhammaad lahayn ayaa sifiican u ah Ilaaha wax abuuray, oo adduunka oo dhan iga daba orda, wuuna daba socdaa adiga. Waxaan ka hadlaynaa kuwa wax doondoonaya, dadka safarka ruuxiga ah ugu jira si ay u ogaadaan xaqiiqooyinka ruuxiga ah.
Laakiin haddii aan u aadno Kitaabka Quduuska ah, waxaan aragnaa in run ahaantii Ilaah asal ahaan isagu yahay wax doondoon ah (waxaan ku aragnaa Kitaabka oo dhan). Ku noqo bilowga Kitaabka Quduuska ah sheekada Aadan iyo Xaawo waxay ka bilaabmaysaa goobta ay Ilaahay ka qariyey. Waxaa la sheegaa in Ilaahay yimaado fiidkii qaboobaha oo uu raadinayo Aadan iyo Xaawo. Wuxuu weydiiyaa: "xagee joogtaa?» Kadib markii uu sameeyay qaladka naxdinta leh ee ku saabsan dilida Masri, Muuse wuxuu u baqay noloshiisa 40 sano wuxuuna u cararay cidlada, halkaasoo Eebbe uu ku booqdo qaab duudduuban oo gubanaya oo bilaabay kulan isaga.
Markii loogu yeedhay Yoonis inuu ku wacdiyo magaca Rabbiga magaalada Nineveh, Yoonis wuxuu ku cararay dhinac ka soo horjeedda oo Ilaah baa daba socday isaga. Haddaan u aado Axdiga Cusub, miyaan aragnaa Ciise oo la kulmaya laba iyo toban nin, garabka ku dheji oo dheh: "Ma jeclaan lahayd inaad ku biirto sababtayda"? Markii aan ka fekero Butros ka dib markuu diidey Masiixa seddex jeer oo ka tegay meeshiisii ​​ugu fiicnaa ee xer ka ahaa oo dib ugu noqday kalluumeysiga - Ciise ayaa yimid oo raadinaya xeebta. Xitaa guuldarradiisii, Ilaah baa raacaya isaga. Waa lagu soo raacay, waa lagu soo raacay ...
Aynu eegno aayadda soo socota (Efesos 1,4: 5): »Xitaa ka hor intuusan aduunyada abuurin, wuxuu innaga inagu fikiray sida dadka Masiixa ah; Isaga isagu wuxuu ina doortay inuu hortiisa hortiisa ku taagan yahay quduus qumman oo aan iin lahayn. Jacayl ayuu ina hayaa indhihiisa hortiisa…: macno ahaan buu innagaga dhex jiraa isaga (Masiixa) la doortay. Wuxuu go'aansaday inuu innagu noqdo wiilashiisa iyo gabdhihiisa - xagga Ciise Masiix iyo xagga isaga. Taasi waxay ahayd doonistiisa wuuna jeclaa. ” Waxaan rajeynayaa inaad fahantay in cilaaqaadka aan la leenahay Ciise Masiix, badbaadada, uu Ilaahey ina siiyay. Waxaa xukuma ilaahay. Waxaa bilaabay Ilaah. Waxaa abuuray Eebbe. Isaga ayaa nala socda.
Ku noqo sheekadeenna. David wuxuu hadda u diray koox rag ah si ay u baaraan Shet waxayna ku ogaadeen isaga oo ku sugan Lo Debar. Halkaa ayaa Schet ku nooshahay keli ahaanshaha iyo qarsoon. Ma uusan dooneynin in la helo. Xaqiiqdii, isagu ma uusan dooneyn in la helo si uu ugu noolaado inta ka hartay noloshiisa. Laakiin waa la ogaadey, oo nimankan waxay kaxeeyaan Shet waxayna u kaxeeyaan gaariga, oo waxay ku riteen gaariga, waxayna dib ugu celiyaan caasimadda, iyo qasrigii. Baybalku wax yar buu inooga sheegayaa ama waxba kama jiraan ee ku saabsan gaadhifaraskan fardooleyda ah. Laakiin waxaan hubaa inaan dhammaanteen qiyaasi karno waxay noqon lahayd in la fadhiisto sagxadda gaariga. Waa maxay shucuurta Schet ay ka dareemeysay safarkan, cabsi, argagax, shaki la'aan. Dareemida sidan oo kale waxay noqon kartaa maalinta ugu dambeysa noloshiisa dunidan. Kadib wuxuu bilaabayaa inuu sameeyo qorshe. Qorshihiisu wuxuu ahaa sidan: haddaan boqorka hortiisa ka muuqdo oo uu i i fiiriyo, wuxuu gartay inaanan isaga khatar ku ahayn. Hortiisa ayaan ku dhacay oo waxaan weyddiistay naxariistiisa, oo malaha wuu ii oggolaan doonaa inaan noolaado. Oo sidaas daraaddeed baabuur wuxuu ku soo jiidaa xagga hore ee guriga. Askartiina way ku qaadaan oo dhigaan qolka dhexe. Oo si uun buu cagihiisa kula diriray, Daa'uudna wuu soo galay.
Fiiro u yeelo waxa ku dhacaya 2 Samuu'eel 9,6: 8: “Markii Merib-Bacal, oo ahaa ina Yoonaataan, iyo wiilkii Saa'uul, wuxuu u sujuuday Daa'uud hortiisa, wejigana dhulka saaray, oo siisay abaalgud wanaagsan. Oo Daa'uudna wuxuu ku yidhi isagii, Adigu waxaad tahay Meriibaal, isna waa u jawaabay oo wuxuu ku yidhi, Haah, anoo addoonkaaga ah addeecidaada, oo Daa'uudow, ha cabsan, waayo, waxaan u roonaan doonaa aabbahaa Yoonaataan. Oo waxaan kuu siin doonaa dhulkii awowayaashaa Saa'uul lahaa oo dhan; Had iyo jeerna miiskayga wax baad cuni kartaa. "" Oo markuu eegay Daa'uud, ayuu waydiinayaa dad badan oo qasbaya su'aasha soo socota. Maryan-Bacal ayaa mar kale wejiga dhulka ku dhacday oo tidhi, Ma istaahilo naxariistaada. Anigu ma ihi waxaan ahay eyga dhintay! ""
Waa maxay su’aal! Banaanbaxan lama filaanka ah ee naxariis ... Wuxuu fahamsan yahay inuu yahay curyaan. Isagu waa qof aan jirin. Ma haysto wax uu ku siiyo David. Laakiin taasi waa waxa nimcadu ku saabsan tahay. Dabeecadda, dabeecadda Eebbe, waa ujeedka iyo dabeecadda inuu dadka wanaagga u sameeyo wanaag iyo wanaag. Saaxiibbaday, taasi waa nimco. Laakiin aan aaminno. Kani maahan adduunka intiisa badan ee aan ku nool nahay. Waxaan ku nool nahay duni dhaha "Waxaan doonayaa xuquuqdayda." Waxaan rabnaa inaan dadka siinno waxa ay mudan yihiin. Mar waa inaan noqdaa xubin xeerbeegti ah, garsooraha ayaa noo sheegay, "Markaad tahay xubin xeer-beegti ah, waa shaqadaada inaad raadsato xaqiiqda oo aad ku dabaqdid sharciga iyaga. Maya wax intaa ka yar. Soo hel xaqiiqda oo ku dabarso sharciga iyaga." Garsooraha ma uusan jeclayn naxariis mana xaqiiqsan naxariis, waxay dooneysay caddaalad, garsooridduna waa muhiim maxkamada dhexdeeda si aysan arrimuhu gacanta uga dhicin. - laakiin anigu cadaalad ma doonayo, waan ogahay waxa aan mudan ahay Markii uu naftiisa badbaadiyay, Daa'uud ayaa naxariis qabtay, laakiin Daa'uud aad buu uga dheeraaday naxariistiisa isagoo u naxariistay isagoo leh, "Waxaan kuu keenay halkaan maxaa yeelay waxaan doonayaa inaan kuu naxariisto." ku: "Waa maxay?"
Waxaa nalagu jecel yahay wax aan ka fikirno
Haa, waa la jabsaday waana nala daba socdaa. Taasina waa sababta oo ah Ilaah wuu jecel yahay.
Rooma 5,1: 2: »Imminka markii Ilaah noo aqbalay rumaysadkeenna aawadeed, nabad baynu la leennahay Ilaah. Taas waxaan ku leeyahay Ciise Masiix Rabbigeenna ah. Wuxuu inoo furay jidka aaminka ah iyo helitaanka nimcada Ilaah, oo aannu hadda ku adkaynay.
Iyo Efesos 1,6: 7: »... si ah ammaanta ammaantiisa loo maqlo: ammaanta nimcadiisa uu inagu muujiyey xagga Ciise Masiix oo ah wiilkiisa uu jecel yahay. Waxaannu ku badbaadnay dhiiggiisa:
Dembigeenna oo dhan waa la dhaafayaa. [Fadlan kor u aqri waxyaalaha soo socda oo ila aqri] sidaa darteed Ilaah wuxuu na tusay hodan nimcadiisa. ” Sidee weyn oo hodan ah nimcada Ilaah.
Ma aqaan waxa qalbigaaga ka socda. Ma aqaan nooca ceebta aad qabto. Ma garanayo nooca sumaddaadu ku taal. Ma garanayo halkaad ku fashilantay wakhtiyadii hore. Ma aqaano falalka ceebta ah ee aad gudaha ku qarinaysid. Laakiin waxaan kuu sheegi karaa inaadan u baahnayn inaad xidhato. Bishii Diseembar 18, 1865, 13-ka beddelidda dastuurka waxaa lagu saxeexay Mareykanka. Wax ka bedelkan 13-aad, addoonsiga dalka Mareykanka waa la baabi'iyey weligiis. Waxay u ahayd maalin muhiim u ah umadeena. Markaa markay ahayd Disember 19, 1865, farsamo ahaan, kuma jirin adoomo badan. Hadana, inbadan baa sii wada addoonsiga - qaar sanado dhawr ah laba arimood awgood:
Qaar baa waligood maqal.
Qaar baa diiday inay rumaystaan ​​inay xor yihiin.
Oo waxaan ka shakisanahay, anigoo xagga ruuxa ka hadlaya, inay dad badan oo naga mid ah qol ku jiraan maanta oo xaalad isku mid ah ku sugan.
Qiimaha mar hore ayaa la bixiyay. Wadada ayaa horey loo sii diyaariyay. Waxay ku saabsan tahay tan: midkoodna ma maqlin ereyga ama waad diidday inaad rumeyso inay run noqon karto.
Laakiin waa run. Maxaa yeelay waa lagu jeclaaday oo ilaahay baa ku raacay.
Dhowr daqiiqadood ka hor ayaan Laila siiyay foojar. Laila uma qalmin. Iyadu uma aysan shaqeynin. Ma u qalmin. Kama buuxin foomka diiwaangelinta. Way timid oo si fudud bay ula yaabtay hadiyaddan lama filaanka ah. Hadiyad qof kale ayaa bixiyay. Laakiin hadda shaqadooda kaliya - mana jiraan khiyaamo qarsoon - waa inay aqbalaan oo ay bilaabaan ku raaxeeynta hadiyadda.
Sidan oo kale, Ilaah ayaa mar hore adiga ku siiyay qiimaha adiga. Waxa kaliya oo ay tahay inaad sameysatid waa inaad aqbasho hadiyadda uu ku siiyo. Anagoo ah rumaystayaasha waxaan la kulannay naxariis. Nolosheena ayaa isku badashay jacaylka Masiixa waxaanan ku galnay jacaylka Ciise. Uma qalmin. Ma aanan u qalmin. Laakiin Masiixu wuxuu na siiyay hadiyaddan aadka ufiican ee nolosheena. Taasi waa sababta nolosheenu hadda uga duwan tahay hadda.
Nolosheena waa jabtay, waxaan sameynay khaladaad. Laakiin boqorkii wuu ina raacay maxaa yeelay wuu na jecel yahay. Boqorka nooma xanaaqin. Sheekada Schet ayaa halkan ku dhamaan karta, waxayna noqon laheyd sheeko weyn. Laakiin waxaa jira qayb kale - ma doonayo inaad ku dhaafo, waa goobta 4-aad.
Meel on guddiga
Qaybta ugu dambeysa ee 2 Samuu'eel 9,7: 15 waxaa ku qornaa: "Waxaan ku siin doonaa dhulkii awowayaashaa Saa'uul lahaa oo dhan; Had iyo jeerna waxaad wax ku cuni kartaa miiskayga. ” Labaatan sano kahor, isla wiilkaan shan jirka ah wuxuu ku dhacay musiibo naxdin leh. Keliya kaliya wuu ka lumay qoyskiisii ​​oo dhan, laakiin waa curyaan yahay oo waa la dhaawacay, ka dib wuxuu ku noolaa masaafuris 20-kii sano ee la soo dhaafay. Haddana wuxuu maqlay boqorkii oo dhahaya: "Waxaan rabaa inaad halkan timaadid." Iyo afar aayood oo dheeraad ah oo Daa'uud ayaa ku yidhi isaga: "Waxaan kaa doonayaa inaad miiskayga ila cuntid sida mid ka mid ah wiilashayda". Waan jeclahay aayaddan. Qorshuhu hadda waa qayb ka mid ah qoyska. David ma uusan oran, "waad ogtahay, Shet. Waxaan rabaa inaan ku siiyo gurigaaga oo aan kugu booqdo marwalba iyo hadaba." Ama: "Haddii aan haysanno fasax qaran, waxaan kuu oggolaanayaa inaad ku fariisto sanduuqa boqornimada adiga iyo qoyska boqortooyada". Maya, ma taqaanaa waxa uu yiri? "Qorshayaal, waxaan kuu diyaarin doonnaa meel miis walba fiidkii la joogo maxaa yeelay waxaad hadda ka mid tahay qoyskayga". Aayadda ugu dambaysa ee taariikhda ayaa leh tan soo socota: “Wuxuu degay Yeruusaalem maxaa yeelay wuxuu ahaa marti joogto ah miiska boqorka. Wuxuu labada lugood ku curyaamay. (2 Samuu'eel 9,13). Waan jecelahay sida ay sheekadu ku dhammaato maxaa yeelay waxaad moodaa inuu qoruhu qormooyin yar ku qoray dhamaadka sheekada. Waxaa jira hadal ah sida ay Schet u soo aragtay nimcadan oo ay tahay inuu hadda la noolaado boqorka oo uu wax ka cuno miiska boqorka. Laakiin isagu isagu ma doonayo inaan illaawin wixii ay ahayd inuu ka adkaado. Isla sidaas ayaa innaga mid ah. Waxa nagu kalifay waxay ahayd baahi deg deg ah oo aan la kulannay kulan naxariis. Dhawr sano ka hor Chuck Swindol wuxuu sheekadan u qoray hab xariif ah. Kaliya waxaan rabaa inaan kuu aqriyo sadar. Wuxuu yidhi: Bal qiyaas meesha soosocda dhawr sano ka dib. Albaabka albaabka ee guriga boqorka ayaa Daa'uud yimid miiskii weynaa oo fadhiistay. Muddo yar kadib Amnoon, kii Amnon ee caajiska ahaa oo xeeladay, wuxuu fadhiyey dhanka bidix ee Daa'uud. Kolkaasaa Taamaar oo ahayd gabadh qurux badan oo saaxiib la ah ayaa soo muuqatay oo ag taagtay Amnoon, dhanka kale Sulaymaanna wuxuu tartiib tartiib uga soo baxay daraasadiisii ​​- Sulaymaan weynaaday, qurux badan, aadna u fikir badan, Absaaloom oo timo qurux badan leh, qurux badan, dhererkiisuna yahay kursiga. Fiidnimadii Yoo'aab, oo ahaa halyeeyga geesiga ah iyo taliyaha guutada, ayaa sidoo kale casho lagu casuumay, laakiin hal kursi weli waa la la'yahay, marka qof walbaa wuxuu sugaa, maqlayaa cagaha isku shareeraya iyo ciribta Isagu wuxuu ku fadhiyaa miiskiisa, oo joonyaduna miyuu daboolayaa cagihiisa. Ma u malaynaysaa in Schet fahamtay waxa nimcadu tahay? Waad ogtahay, taasi waxay sharrax ka bixin doontaa mustaqbal marka reerka oo dhami ay Ilaah ku soo wada ururi doonaan miis ballaadhan oo cirka lagu diyaariyo. Oo maalintaas, gogosha miiska nimcada Eebbe ayaa daboola baahiyadeenna, waxay daboolaysaa naftayada caloosha ah. Waad aragtaa, habka aan qoyska ku dhex galno waa nimco, oo waxaan ku sii wadnaa qoyska dhexdiisa nimco. Maalin kasta waa hadiyad ka timid nimcadiisa.
Annagaa ka mudnaan badan sidii aan u maleyneynay
Ilaah keliya ma badbaadin nolosheena, laakiin wuxuu haatan nagu xoojiyay noloshiisa nimcada. Dhagayso ereyadan Rome 8, Bawlos wuxuu leeyahay:
»Maxaa looga hadhayaa waxaas oo dhan? Isaga qudhiisa baa nala jira, isaguna wuu jiraa, haddaba bal yaa doonaya inuu inaga soo horjeesto? Isagu uma tudhin wiilkiisii, laakiin wuxuu u dilay dhammaanteen. Hadduu ina siiyo wiil, ma wax inaga fogiyaa? (Rooma 8,31-32).
Keliya isagu kuma uusan siin Masiixa si aan qoyskiisa u nimaadno, laakiin hadda wuxuu ku siinayaa wax walba oo aad ugu baahan tahay inaad ugu noolaato nolol nimco leh mar haddii aad reerka ku jirto.
Laakiin waan jeclahay weedhan: "Ilaah baa inala jira." Aan ku celiyo: "Ilaah baa idinla jira." Mar labaad, shaki kuma jiro in qaarkeen maanta halkaan maanta joogaa aysan rumeysneyn taas, marna nama dhicin in qof walba uu ku sii jeedo qalloocinta garoonka si uu noogu kiciyay.
Waxaan ku ciyaaray kubbadda koleyga dugsiga sare. Caadi ahaan ma haysanno daawadayaal markii aan ciyaareyno. Si kastaba ha noqotee, maalin maalmaha ka mid ah jirdhiska ayaa buuxa. Markii dambe waxaan ogaadey inay qorsheynayeen lacag aruurinta maalintaas oo iibsan doonta bixitaanka fasalka fasalka rubuc dollar. Kahor taas kahor waa inaad timaadid ciyaarta ciyaarta baseball-ka. Dhamaadka xukunka seddexaad, waxaa jiray hum qaylo badan, iskuulkii waa laga eryay, qolka jimicsigana wuu faaruqiyay sida ugu dhaqsaha badan. Laakiin halkaas, dhexda dhegaystayaasha dhageystayaasha, laba qof ayaa fadhiyey halkaas ilaa dhamaadka ciyaarta. Waxay ahayd hooyaday iyo ayeeyaday. Ma ogtahay waxa? Waxay ahaayeen aniga, oo xitaa ma aanan ogeyn inay halkaas joogeen.
Mararka qaar waxay kugu qaadataa waqti dheer kadib in qofkasta oo kale uu ka fiirsado - ilaa aad ka xaqiiqsato in Ilaah dhinac kasta kaga jiro. Haa, runtii, wuuna ku daawanayaa.
Qisada Schet waa mid weyn, laakiin waxaan rabaa inaan ka jawaabo su'aal kale intaanan u bixin, waa: hagaag, iyo?
Aynu ka bilowno 1 Korintos 15,10:22: "Laakiin nimcadii Ilaah sidaas ayaan ku noqday, oo naxariistiisa aawadeed ayaan wax aan waxtar lahayn ku noqotay." Qoraalkani wuxuu u muuqdaa inuu dhaho, "Haddii aad leedahay kulan nimco leh, isbedelo ayaa isbeddelaya.» Markii aan yaraa oo aan koray, waxaan ku fiicanahay iskuulka waxkastoo aan isku dayeyna waan ku guuleystey. Ka dib waxaan aaday kuliyad iyo seminar waxaanan helay shaqadayda ugu horeysay ee aan wadaad ahaan ahaan jiray markay ahayd sano. Waxba kama ogi, laakiin waxaan moodayay inaan wax walba garanayo, waxaan ku jiray seminarka waxaan u duulay oo usbuuc walba u duulayay tuulo aad u badan oo ku taal bartamaha Arkansas. badhtamaha galbeed ee Arkansas.
Waa adduun kale oo ka duwan dadka halkaa ku sugnaa waxay ahaayeen uun jacayl. Waan jeclaan jirnay iyagana way na jeclaayeen. Laakiin waxaan halkaas u tegey hadafka ah in la dhiso kaniisad oo aan noqdo wadaad wax ku ool ah. Waxaan doonayay inaan wax walba ku dhaqan geliyo wixii aan ku soo bartay seminarka. Laakiin, si daacad ah, ka dib markii aan halkaas joogay qiyaastii laba sano iyo badh, waa la i qabtay. Ma aqaanin waxa aan sameyn karo.
Kaniisadda si dhib yar ayey u kortay. Waxaan xasuustaa weydiista Ilaah: Fadlan meel kale ii dir. Kaliya waxaan rabaa in aan ka fogaado halkaan. Waxaan xasuustaa aniga oo fadhiya miiskayga oo kaligay fadhiya xafiiskayga iyo cid kale oo kiniisadda oo dhan wada fadhida. Shaqaalaha oo dhami waxay ahaayeen aniga oo waxaan bilaabay inaan ooyo oo aad buu u welwelsanaa oo wuxuu dareemay cilad iyo waxaan dareemay inaan illoobay oo aan ku tukaday anigoo dareemaya inaanu cidna dhageysanayn.
In kasta oo ay taasi ka badneyd 20 sano ka hor, wali si fiican ayaan u xusuustaa. In kasta oo ay ahayd waayo-aragnimo xanuun badan, haddana waxay ahayd mid waxtar badan maxaa yeelay Ilaah wuxuu noloshayda u adeegsaday inuu jebiyo kalsoonideyda iyo kibirka wuxuuna iga caawiyay inaan fahmo in wax kasta oo uu doonayo inuu noloshayda sameeyo , waxaas oo dhan waxay u ahayd nimcadiisa - oo aan ahayn inaan wanaagsanahay ama inaan hibo u leeyahay ama sababtoo ah waxaan ahay qof xirfad leh. Markaan ka fekero safarkaygana dhowrkii sano ee la soo dhaafay oo aan arko inaan awoodey inaan helo shaqo sidan oo kale ah (oo aan ugu liito aqoonta aan halkan ku sameeyo), waxaan inta badan dareemaa inaanan ku filnayn. Waxaan ogahay hal shay meel kastoo aan joogo, wax alla wixii Eebbe doonayo inuu noloshayda ku sameeyo, aniga ama aniga aniga, wax walba waxaa lagu sameeyaa nimcadiisa.
Markaad fahamto taas, markay runtii gasho gudaha, isku mid ma noqon kartid.
Su’aasha aan bilaabay inaan isweydiiyo waxay tahay, "Aniga oo ah Rabbiga yaqaanna waxaan ku noolahay nolol muujineysa nimco?" Maxay yahiin astaamaha tilmaamaya "Waxaan ku noolahay nolol nimco leh?"
Aynu ku soo gabagabeyno aayadda soo socota. Bawlos wuxuu yidhi:
»Laakiin waa maxay noloshayda! Waxa kaliya oo muhiim ah in ilaa dhammaadka aan ka soo baxo waajibaadka uu Rabbi Sayidku i siiyay [midkee?]: Inaan ku dhawaaqo injiilka [farriinta nimcadiisa] in Ilaah dadka u naxariisanayo " (Falimaha Rasuullada 20,24). Bawlos wuxuu yidhi: kani waa shaqadayda noloshayda.
Sida Schet oo kale, aniga iyo aniga waxaan ku dhex jabnay ruux ahaan, ruux ahaanna waa dhintay laakiin sida Schet oo kale, waxaa nalagu raacay sababta oo ah boqorka dunidu wuu jecel yahay oo wuxuu doonayaa inuu qoyskiisa ku dhex noolaado. Wuxuu doonayaa inuu na yeesho kulan naxariis ah. Waxaa laga yaabaa in taasi tahay sababta aad halkan u joogtid saaka oo aadan xitaa hubin sababta aad halkan u timid maanta. Laakiin gudahaaga waxaad ku aragtaa in si xun u jiidaya ama ku jiidaayo wadnahaaga. Tani waa Ruuxa Quduuska ah ee kula hadlaya: "Waxaan kaa doonayaa reerkayga." Iyo, haddaanad qaadin tillaabada aad ku billaabeysid xiriir qofeed oo lala yeesho Masiixa, waxaan jeclaan lahayn inaan ku siinno fursaddaan subaxnimo. Kaliya dheh waxyaabaha soo socda: "Waa i kan. Ma haysto wax aan bixiyo oo aanan qummanahay. Haddaad runtii noloshayada garaneyso ma jeclaan laheyn." Laakiin Ilaah wuu kuu jawaabi lahaa: "Laakiin waan ku jeclahay Marka waxaan rabaa inaan ku weydiisto inaad sujuudaan daqiiqad, haddii aadan waligaa qaadin talaabadan, waxaan kaa codsanayaa inaad ila soo ducayso. Waxaan leeyahay xukun, waxaad u baahan tahay oo kaliya inaad ku celiso, laakiin waxaad u sheegtaa Rabbiga.
«Lieber Jesus, wie Schet weiss ich, dass ich kaputt bin, und ich weiss, dass ich dich brauche, und ich verstehe es nicht vollständig, aber ich glaube, dass du mich liebst und dass du mir nachgegangen bist und dass du, Jesus, am Kreuz gestorben bist und der Preis für meine Sünde schon bezahlt worden ist. Und darum bitte ich dich jetzt, in mein Leben zu kommen. Ich will deine Gnade kennen und erfahren, so dass ich ein Leben der Gnade führen und immer bei dir sein kann.
Waxaa qoray Lance Witt